ओलीको कार्यकालमा नेपाल स्वर्ग !!! | Bichar | Image Khabar
होमपेज / Bichar / ओलीको कार्यकालमा नेपाल स्वर्ग !!!
ओलीको कार्यकालमा नेपाल स्वर्ग !!! | Published: January 10, 2016 | आईतवार 26 पुष, 2072 | 2:45 PM | Viewed: 5115 times
हरिविनोद अधिकारी - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मधुमासको पनि अन्त्य हुन लागेको छ । यताका तीन महिनामा केही भएन भनेर आलोचना गर्नेहरुलाई ओलीजीले गालीको वर्षा गराउन थाल्नुभएको छ । के देख्छन् र आलोचना गर्छन् कुन्नि? के भएको छैन र ? बजारमा तेल फालाफाल छ । ग्याँस जताततै पाइन्छ । तेलको मुख्य कार्यालय बबर महलबाट कलंकी र गौसालामा सरेकोमात्र हो । ग्याँसको विक्री डिपोहरु बन्द गरेर रातीराती कालोबजारमा गएको मात्र हो । पैसा हुनेले के पाएका छैनन् र ?बिजुली दिनमा १२ घण्टा त आएकै छ, कहिलकाहिँमात्र १५ घण्टा नआएको हो । त्यसो त पहिले पनि त्यस्तो नभएको कहाँँ हो र ? परार अमेरिकामा पनि एक हप्ता बिजुली गएको थियो तूफान आउँदा । जहाँ पनि त्यस्तो हुन्छ । बजारमा सामानका मूल्य दोबर या तेबर मात्र त भएको हो, सामान त पाइएको छ नि ।
भूकम्प पीडितका वारेमा कुरा गर्दा राणाकालीन एउटा भनाइ याद आयो । श्री ३ जुद्ध समशेर जबराका समयमा वारुण यन्त्र आयो । त्यसैले अहिले पनि जुद्ध वारुण यन्त्र भनेर दमकललाई पुकारिन्छ । त्यसबेलामा दमकल चाहिए राणाजीका बक्साएरमात्र आगो निभाउन जान्थ्यो रे । एकपटक बत्तीस पुतलीको कुनै गल्लीको घरमा आगो लाग्यो । बिचरा दौडदै दौडदै जुद्ध सडकमा गएर दमकल चाहियो भनेर निवेदन दियो । त्यो निवेदन चिप्लेकीराको गतिमा श्री ३ समक्ष पुग्यो ६ महिनापछि । श्री ३ले तत्काल आदेश दिनुभयो —दमकल लगेर त्यो घरमा आगो निभाउनू । नभन्दै दमकल घण्टी बजाउँदै हुइँकियो र बत्तीस पुतलीमा आगो लागेको घर खोज्टै श्री ३को आदेश पालना गर्न थाल्यो । पाठकहरु , त्यो घरमा आगो लागिरहेको हुँदो हो त ? ठीक त्यस्तै भयो भूकम्प पीडितहरुका लागि । जाडोको न्यानो भन्नुस् वा बासको कुरा । भूकम्प गयो बैसाखमा, प्राधिकरणले हतार हतारमा पूर्णता पायो पुसको तेस्रो हप्तामा । हतार हतारमा सबै काम भएको छ त्यो पनि ओलीजीको मधुमासमा मात्र ।
पहिलेको प्राधिकरणलाई किन काम गर्न नदिएको भनेर सोच्दा अहिलेका बनावट र कामको गतिले थाहा हुन्छ किनभने पहिले पनि एमाले सरकारमा थियो , मात्र प्रधानमन्त्री काँग्रेसका थिए । अहिले खरबौँमा हाली मुहाली गर्ने सुरले होला , प्राधिकरणले पूर्णता पाएको छ । कहिलेकाहिँ के पनि हुन्छ भने तयार गरेको भात अरुले खान्छन् । कहीँ मधुमासको अन्त्य र सरकारको अन्त्य सँगै त हुँदैन ? सोचनीय मात्र हो ।
सरकारले कूटनीतिलाई स्पष्ट नीतिको रुपमा प्रयोग गर्दै ,गालीको रुपमा नेपालको राष्ट्रवादलाई मलजल गरेको छ । विपक्षीहरु गाली सुन्दा सुन्दा गदगद छन् । ४६ जनाबाट अब मधेसका असन्तुष्टहरुलाई समेत सरकारमा आएर आफ्ना एजेन्डा पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीजीले अनुरोध गरे पनि कम्तीमा पनि ६० सदस्यीय हुनै प¥यो किनभने माओबादीका राज्यमन्त्रीहरु त आउन नै बाँकी छन् । अनि यो देशको विकास पक्कै हुन्छ र हावाबाट बिजुली, फोहोरबाट बिजुली, प्राकृतिक ग्याँस भण्डारबाट ग्याँसको पाइप घरघरमा ,सबै खोलाबाट एघार महिनाभित्रमा बिजुली निकालेर लोडसेडिङको अन्त्य हुनेछ । वास्तवमा यत्रो मन्त्रिमण्डल बनाउनुको कारण नै काँग्रेस हो किनभने काँग्रेसका बेलामा यत्रो बनाउनु नै परेको थिएन , उल्टै ती सुशील भन्ने प्रधानमन्त्रीले त राधा ज्ञवालीजीलाई नै पो उर्जा मन्त्रीबाट हटाए । अनि ती सँग कसरी सहकार्य गर्ने भनी माओबादी र राप्रपा नेपालसँग साँठगाँठ गरेर सरकार बनाएकै हो नि छ । ती अलि अप्ठ्यारा थिए र जथाभावी मन्त्री राख्न पनि मान्दैनथे । रक्षा मन्त्री, गरिबी निवारण मन्त्री नराख्ने ती प्रधानमन्त्रीलाई ती ठाउँहरुमा उप प्रधानमन्त्री नै राखेर मधुमास मनाउँदा पनि के को आलोचना ?
एउटा कथा छ—एउटा राजा थिए र ती अलि बढी धाकधक्कु लगाउँथे । पत्याउनै गारो हुने गरी धाक लगाउने । आफ्ना वरिपरि अनुचर र कुरा मिलाउने मान्छे,रफ्फुगर, राख्ने । एकदिन के गफ हाँके भने उनले बाण हान्दा मृगको कानमा र खुरमा प्वाल प¥यो । भारदारहरुले सोधे—सरकार , त्यसो त नहुनु पर्ने ? राजाले तत्काल रफ्फुगरलाई त्यसको पुष्टि गर्न संकेत गरे । उसले पनि यसरी पुष्टि ग¥यो—सरकारले वाण चलाउने बेलामा त्यो मृग खुरले कान कोट्याउँदै थियो । अहिले पनि रेडियो, टेलिभिजनमा मधुमासमा रमेका प्रधानमन्त्रीका प्रत्येका महानवाणीलाई पुष्टि गर्न उहाँका महान सल्लाहकारहरु व्यस्त छन् । ती माधव नेपाल फेरि के भएका , प्रधानमन्त्रीका कुरालाई हावादारी भनेर उडाउन खोज्छन् बा । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा पनि गर्न नसक्ने, अनि ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदाचाहिँ भनेको कुरालाई खिसी गर्ने । हेर्दै जानुस् माधवजी, अब ओलीजी पछिको प्रधानमन्त्रीमा कमल थापा र सुबास नेम्बाङको सहकार्य हुन्छ कम्बोडियामा पहिले भएजस्तै । राजाको मान्छे र कम्युनिस्टको मान्छे । फोन्सेपिकका राजकुमार रणऋद्ध र कम्युनिस्ट नेता हुनसेनको सहकार्य भएजस्तै । अनि के हुन्छ कम्बोडियामा के भयो , त्यही हुन्छ । पोलपोटको के भयो, हेङ सामरिङको के भयो , प्रचण्डको पनि त्यही हुन्छ ।
त्यसैले यो दूरगामी असर पर्ने मधुमासको अन्त्य नभए पनि हुन्थ्यो ! किनभने सबै मन्त्रीहरुको मधुमासको अहिले कहाँ अन्त्य भएको छ र! प्रधानमन्त्री प्रणाली भनेका सामूहिक शासन प्रणाली हो । यो रामराज्यको सुरुवातमा धेरै आलोचना नगरौँ । पहिलेको नेपाल पनि यही हो र अहिलेको नेपाल पनि यही हो । कृपया, हामी जनता सहौँ र अझ सहौँ। सरकारलाई निर्वाध यसैगरी चल्न दिऔँ,अनि नेपाल स्वर्ग हुन्छ अनि हामी सबै स्वर्गवासी ।